Enwere ike ịkekọrịta ndepụta ebe kachasị amasị ugbu a na Google Maps | Androidsis
Nwere ike ịkekọrịta ndepụta ọkacha mmasị gị na Google Maps na ndị enyi gị
Google Maps nwere ọrụ magburu onwe ya ọzọ na-enye ohere nwere ndepụta nke saịtị echekwara nke gbagwojuworo gị anya n'ihi ihe ọ bụla kpatara ya. Restaurantlọ oriri na ọ Japaneseụ Japaneseụ ndị Japan ahụ ị gara na izu gara aga na nke ị chekwara na ndepụta ahụ, ga-adịrị gị mgbe niile ịlaghachi na oghere ahaziri nke ọma nwere ebe kachasị amasị gị.
Na nnukwu obodo dịka Madrid, iji ọrụ a dị mkpa iji cheta ebe ahụ pụrụ iche ha were gị otu ụbọchị yana ịchekwala na ndepụta ahụ. Ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, mgbe Google na-enye ohere site taa kekọrịta ndepụta ndị a na ndị ọrụ ndị ọzọ dị ka ha bụ ndị enyi ma ọ bụ ezinụlọ. Nwere ike ịgbaso ndepụta nke ndị ọzọ iji mara ebe ha chọtara na ngwụcha izu gara aga ma ị nwere ike idobere tebụl maka nke ọzọ.
Kachasị mma, ị nwere ike ịme ihe a niile na-enweghị mgbe ịpụ na ngwa Google Maps; otu nke ghọrọ ihe pụrụ iche iji chọọ ụdị azụmahịa niile, nweta nyocha ma ọ bụ ọbụna mara ihe ụbọchị na rush awa yabụ na ị gaghị echere ogologo n’ahịrị.
Naanị ị ga-emepe ngwa Google Maps wee chọta ebe ahụ pụrụ iche. Click pịa na aha ya na mgbe ahụ ị na-enye akara ngosi «Chekwa» ịgbakwunye saịtị na otu nke ndabara ntọala dị ka "Achọrọ m ịga" ma ọ bụ "ọkacha mmasị". Nwere ike ịgbakwunye ụlọ oriri na ọ restaurantụ toụ na ndepụta ọhụrụ ị kpọrọ onwe gị, dị ka "ụlọ nri dị ọnụ ala" ma ọ bụ "ebe ndị mara mma."
Iji nweta ndepụta ndị a, ị ga-aga "Ọnọdụ gị" na menu akụkụ ma mepee taabụ echekwara. Na akara ngosi maka ebe ndị echekwara Ha ga-apụta n'otu map ahụ, yabụ ị ga-enweta ha n'aka iji mepụta atụmatụ izu ụka ka mma.
Nwere ike ịkekọrịta ndepụta ahụ ị nwere ike ime ya site na ederede, email, netwọkụ ma ọ bụ ngwa nkata. Ozugbo ị nyefere njikọ ahụ, ha ha nwere ike soro ya iji nweta ohere gaa ebe ndị ahụ pụrụ iche ị jiri ịhụnanya dị ukwuu nọrọ na ọnwa ole na ole.
Enwere ike ilele ndepụta ndị a site na mkpanaka, desktọọpụ na ọbụna na-anọghị n'ịntanetị ma ọ bụ na anọghị n'ịntanetị. Ọ bụrụ na ibudatara maapụ ndị ahụ na offline, ị ga-enwe ike ịchekwa megabytes na njikọ Wi-Fi.
Mmelite ọzọ na-adọrọ mmasị dị ka nke ahụ mere n’izu gara aga.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Nwere ike ịkekọrịta ndepụta ọkacha mmasị gị na Google Maps na ndị enyi gị
Samsung India na-ebupụta Galaxy S8 + Nkwado Peeji